चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडा धेरै - Kantipath.com
यस वर्षको गणनामा निकुञ्जमा ६९४ गैँडा भेटिएका थिए । पूर्वमा सौराहा आसपासका क्षेत्रमा गैँडाको राम्रो बसोबास रहेको पाइएको छ ।
यहाँ ९५ वटा गैँडा रहेका छन् । निकुञ्जको पुरानो पदमपुर आसपासका क्षेत्रमा ती गैँडा गणनाका क्रममा भेटिएका हुन् ।
त्यसैगरी सोही क्षेत्रको नजिक बहपुर खोला आसपासमा ६३ वटा गैँडा भेटिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम मकवानपुर जिल्लाको प्रतापपुर क्षेत्रमा एउटा मात्रै गैँडा भेटिएको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै त्रिवेणीको कानामाना क्षेत्रमा तीन वटा मात्रै गैँडा भेटिएका छन् ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले घाँसे मैदान र पानीको स्रोतहरु पूर्वमा बढी व्यवस्थित भए पनि पश्चिममा गैँडाको सङ्ख्या बढी भएको बताए ।
भारततर्फ जानसक्ने टेम्पल टाइगर, भेलौजी, सेरी, धजाहा, बगुवनलगायतका क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी गैँडा रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । ती क्षेत्रमा धेरै गैँडा हुनु जोखिमपूर्ण रहेको बरालको भनाइ छ ।
Previous Previous post: सरकारी बजेटको बत्तिमा बागमतीका सभामुखको प्रचार : सस्तो लोकप्रियताको होड !
Next Next post: टोपबहादुर प्रमुख भएको संगठनद्वारा जनयुद्धका सहिदका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा तालाबन्दी
लुम्बिनीमा पोखरेलको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन जसपाको ह्वीप
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्धा सर्वोच्चमा अलपत्र
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री हटेपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताले दिए राजिनामा
कोभिड-१९ नागरिक सरोकार अभियानटोलीले गर्याे कोरोना बिशेष अस्पतालको निरीक्षण
बाँझो जमीन उपयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणा
पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने
कोरोना अस्पतालको विषय राजनीतिकरण नगरौ – नेकपा, चितवन
म केपी ओलीले भन्दैमा आफ्नो निष्ठा त्याग्ने मानिस होइन: निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई दिएको धम्कीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति
पाँचथरको फिदिममा एक ८० बर्षीय वृद्धको हत्या
माधवका एक्ला सांसदसँग ओलीका ३ सांसद जोडिएपछि जोगियो गण्डकी प्रदेशसभा !
सुन्दर खेल फुटबल : जब मैदानमा साथीहरुले एरिक्सनको ज्यान जोगाए